हृदय इन्स्टाग्राम 🥇 अनुयायीहरू on on मा के मतलब हो
इन्स्टाग्राममा मुटुको मतलब के हो
को शुरुआत बाट इन्स्टाग्राम २०१० मा एक अनुप्रयोगको रूपमा, आज सम्म। टिप्पणीहरू, मलाई उनीहरू मनपर्दछ, अनुयायीहरू र प्रकाशनहरू प्लेटफर्मको हिस्सा भएको छ। अन्य प्लेटफर्महरू विपरीत, आईकन जसले मनपर्ने प्रतिनिधित्व गर्दछ अलि फरक छ। फेसबुक जस्ता अन्य प्लेटफर्महरूमा, हामी एउटा थम्ब अपको साथ एक हातको आइकन फेला पार्न सक्छौं। यस क्षणको सामाजिक नेटवर्कमा हामी हृदय पाउन सक्छौं। इन्स्टाग्रामले प्रसिद्धी (२०१-2013-२०१।) प्राप्त गर्न थालेपछि मानिसहरूले प्लेटफर्मको फेसबुक फेसबुकमा तीन बर्ष भन्दा बढी प्रयोग गर्दै आएका थिए। र त्यो हातको सट्टामा हृदयको उपस्थितिले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि केही शंका उत्पन्न गर्‍यो। र यद्यपि इन्स्टाग्रामको मुटुको मतलब के हो यो "मलाई मनपर्दछ" हो, हामी प्लेटफर्ममा अन्य हृदयहरू पनि भेट्टाउन सक्दछौं, जुन उनीहरूको मनपर्दोसँग सम्बन्ध रहेको भए पनि त्यसको मतलब छैन। अर्को हामी तपाईंलाई देखाउने छौं इन्स्टाग्रामको मुटुको मतलब के हो.
इन्स्टाग्रामको मुटुको अर्थ के हो?
हामीले अगाडि उल्लेख गरेझैं के इन्स्टाग्रामको मुटुको मतलब के हो हामी प्रकाशनमा फेला पार्न सक्छौं जस्तो छ। तर इन्स्टाग्राम भित्र अन्य मुटुहरु पनि छन्। मनपर्नेहरू, वा मनपर्नेहरू, आईएसओ यन्त्रहरूको लागि सुरूवात हुन अघि इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मको साथ आएका छन्। 2009 को अन्त मा, केविन Systrom एक इंस्टाग्राम प्रोटोटाइप डिजाइन गरेको थियो। जसले उसलाई सन्तुष्ट र छोडेन। अर्को वर्ष, 2010 मा, माइक क्रेइगर उहाँसँग सामेल भए र उनीहरूले सँगै इन्स्टाग्राम डिजाइन गरे। केही प्रकार्यहरू लिदै जुन उसको प्रोटोटाइप Burbn मा थियो। बाँकी यी कार्यहरू मध्ये एक लाइक, टिप्पणीहरू र प्रकाशनहरू थिए।
त्यसो भए के इन्स्टाग्रामको मुटुको मतलब के हो मलाई यो प्रकाशनहरूमा मनपर्दछ। तर हामी तल्लो इन्स्टाग्राम मेनूमा पनि हृदय भेट्टाउन सक्छौं। यो तपाईंले अनुसरण गर्ने व्यक्तिको गतिविधिहरू, उनीहरूको टिप्पणीहरू, मनपर्दो र खाताहरू अनुसरण गर्दछ जुन उनीहरू पछ्याउँदछन्। यसले तपाईंको खाताको गतिविधि पनि देखाउँदछ, जो तपाईंको फोटोहरूमा टिप्पणी गर्दछन्, मनपर्दछ र जो तपाईंलाई पछ्याउँदछन्। हामी इन्स्टाग्राम कथाहरू र इन्स्टाग्राम प्रत्यक्षमा पनि हृदयहरू भेट्टाउन सक्छौं। तर, प्रकाशनहरूमा जस्तै के que यसको मतलब इन्स्टाग्रामको मुटु कथाहरूको र डीएम जस्तै छ।
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, त्यहाँ मनपर्ने वा मनपर्ने बिभिन्न प्रकारका हुन्छन्। र यद्यपि के इन्स्टाग्रामको मुटुको मतलब के हो मलाई यो प्रकाशनहरूमा मनपर्दछ। मेरो प्रकारका तपाईलाई कारण दिनको आधारमा फरक पर्दछ। अर्को हामी तपाईंलाई मनपर्ने बिभिन्न प्रकारहरू देखाउनेछौं:
मलाई इमानदार मन पर्छ
यो मलाई मनपर्दछ कि तपाईं वास्तवमै प्रकाशन दिनुहोस् किनभने तपाईंलाई यसको सामग्री मनपर्दछ। हामी यसलाई समर्थन गर्दछौं वा हामी केवल छवि वा क्याप्सनसँग सहमत छौं।
प्रतिबद्धताको लागि मन पराउनुहोस्
यो त्यस्तो हो कि तपाईं आफ्ना साथीहरू वा परिवारलाई दिनुहुन्छ, आवश्यक छैन किनभने तपाईंलाई प्रकाशन मनपर्‍यो। यसमा प्रतिस्पर्धा प्रकाशनहरूमा फेला परेका मनपर्नेहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, जहाँ प्रयोगकर्ताले मलाई मात्र जित्न इच्छाको लागि मनपराउँदछ।
सामाजिक नेटवर्क भित्र stalkear धेरै सामान्य छ। तर, इन्स्टाग्राम भित्र पनि धेरै। जहाँ हामी एक व्यक्ति पाउँछौं, हामी उसको जीवनमा चासो लिन्छौं, चाहे प्रसिद्ध हो वा नहोस्, हामी उसको सामग्रीलाई मनपर्दछौं। त्यसोभए तपाईं तिनीहरूको प्रकाशनहरू खोजी गर्न थाल्नुहुन्छ र तीन बर्ष भन्दा बढी पहिले सामग्रीमा पुग्नुहुन्छ। र तपाइँ यसलाई गल्तीले मनपराउन सक्नुहुन्छ।
फ्यान लाई मनपर्‍यो
यी मनपर्दोहरू हुन् जुन तपाईंले अनुसरण गर्नुभएका ती सेलिब्रेटीहरूलाई।
मलाई गल्तीले मन पर्छ
यस मा stalker मन सक्छ। यद्यपि ती सुरूहरू ती प्रकाशनहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईं अनजानमा मनपर्न चाहनुहुन्छ।
किनकि अरुलाई मनपर्दछ
इन्स्टाग्राम भित्र बथानहरूको मानसिकता धेरै सामान्य छ। कुन त्यो हो यदि कसैलाई पोष्ट मनपर्‍यो भने, तपाईंलाई पनि मनपर्दछ। वा जब एक फोटो वा भिडियो पोस्ट को धेरै मनपर्दो हुन्छ, तपाईं पनि यो दिनुहोस्। आवश्यक छैन किनकी तपाईं सामग्री मन पराउनुहुन्छ, पहिचान महसुस वा यो समर्थन। यसको एक स्पष्ट उदाहरण गत वर्षको बीचमा इन्स्टाग्राममा प्रख्यात अण्डा खाता हो। जहाँ अण्डाको एकल फोटोको साथ खाता प्लेटफर्मको सबैभन्दा मनपर्नेको साथ फोटो भयो।
तपाइँले तिनीहरूलाई मनपराउनु भएको पोष्टहरू कहाँ छन्?
इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मनपर्ने सबै पोष्टहरूको साथ ईतिहास राख्छ। र तपाईं यसलाई इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्न तपाईले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ:
इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाइँको प्रोफाइल मा जानुहोस्।
प्रोफाइलको माथिल्लो दायाँ कुनामा तपाईले तीन-लाइन आइकन पाउनुहुनेछ जुन सेटिंग्सको अर्थ हो। प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सेटिंग्स भित्र विभिन्न विकल्पहरू छन्। अन्तिममा जानुहोस्, कन्फिगरेसन एक।
एक पटक कन्फिगरेसन भित्र अर्को मेनू देखा पर्नेछ। यसमा तपाईले विकल्पहरू देख्नुहुनेछ: सूचनाहरू, गोपनीयता, विज्ञापन, सुरक्षा। हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा खाता विकल्प हो। तपाईंले यसमा क्लिक गर्नुपर्छ।
बदलेमा, खाता विकल्प भित्र, तपाईं विकल्पहरूको अर्को श्रृंखला भेट्टाउनुहुनेछ। मेनूलाई स्लाइड गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं विकल्प फेला पार्नुहुन्न: "तपाईंलाई मनपर्ने प्रकाशनहरू"। यो विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाइँले मनपराउनुभएका प्रकाशनहरूमा तपाइँले मनपर्नुहुने सबै प्रकाशनहरूका साथ एक सूची देख्नुहुनेछ।
तपाईका अनुयायीहरूलाई कुन पोष्ट मनपर्दछ?
ईस्टग्राम अनुप्रयोगको तल्लो मेनूमा धेरै विकल्पहरू फेला पर्‍दछन्। तिनीहरू मध्ये एकको हृदय प्रतिमा छ। इन्स्टाग्रामको यो खण्डसँग मनपर्ने, टिप्पणीहरूको जानकारी छ र अरूले तपाईंको प्रोफाइललाई दिन्छन्। तर तपाईले पछ्याउनु भएको व्यक्तिको खाताका बारे पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यो जानकारी पहुँच गर्नका लागि तपाईंले इन्फर्नोस मेनूको मुटु विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। बदलेमा, यसको भित्र तपाईले एउटा शीर्ष मेनू फेला पार्नुहुनेछ दाँयामा "तपाइँ" र बायाँमा "अनुसरण गरिएको" शब्दहरूको साथ। यस सेक्सनमा फेला परेको खाताहरूमा जानकारी सब भन्दा भर्खरको भन्दा वास्तविक समयमा सब भन्दा पुरानो हो। यहाँ तपाईले उनीहरुलाई पछ्याउने मानिसहरुलाई हेर्नु हुनेछ, खाताहरु मनपराउने वा टिप्पणी गर्ने।
के इन्स्टाग्रामले लाइकहरू हटाउनेछ?
केहि समय अघि यो सम्भावनाको बारेमा हल्ला फैलिन थाल्यो हटाउने जस्तै इन्स्टाग्राम तर किन? अध्ययनका अनुसार, टिप्पणीहरू, फलोअरहरू र सबैभन्दा बढि, म तिनीहरूलाई मन पराउने नकारात्मक असर गर्दछ। मानिसहरूले मनपर्ने, अनुयायीहरू र टिप्पणीहरू स्वीकृतिका साथ सम्बन्धित गर्न शुरू गरेका छन्। जति म तपाईंलाई मन पराउँछु, तपाईंलाई त्यति नै स्वीकार्य महसुस हुन्छ। यसका अतिरिक्त उनी आफैलाई मान्छे प्रसिद्ध भएको चाहान्छन्। किनकि जति धेरै म तपाईंलाई मन पराउँछु, मानिसहरूलाई जति तपाईंलाई चिन्छन्, तपाईं आफुलाई स्वीकार गरेको महसुस गर्नुहुन्छ। के मानिसहरु लाई नकारात्मक असर गर्छ जो चाहान्छन् प्राप्त गर्दैन।
इन्स्टाग्रामले मनपराउने सम्भावित हटाउने बारेमा कुरा गर्‍यो। धेरै प्रयोगकर्ताहरूसँग सहमत छैन भन्ने कुराले, तर, प्लेटफर्मले मनपर्नेहरू पनि हटाउने छैन। केवल मनपर्ने काउन्टर हटाउने विचार उठाइएको छ। यो विश्वको विभिन्न भागहरु मा परीक्षण गर्न यो राखिएको छ। जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले पोष्टहरू मनपराउन जारी राख्न सक्दछन्। तर, जहाँ मनपर्दो संख्या छ कि प्रकाशन छ छैन। यो जानकारी खाता द्वारा स्वामित्व पाएका प्रयोगकर्ताले मात्र लिनेछन्। मनपर्ने काउन्टर हटाइएको खण्डमा इन्स्टाग्रामले काम गर्ने तरिका निम्न छ: यदि तपाईंलाई पोष्ट मनपर्दछ, र तपाईंले पछ्याउनुहुने प्रयोगकर्ताहरूको अर्कोले पनि दियो भने यो देखापर्नेछ, तर पूर्ण हुँदैन म तिमीलाई मन पराउँछु
कारण किन इन्स्टाग्राम काउन्टर हटाउन चाहन्छ
इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मसँग मनपर्ने काउन्टर हटाउनका लागि धेरै कारणहरू छन्। जति धेरै समय बित्छ, इन्स्टग्राम प्रयोगकर्ताहरूले झुण्ड मानसिकता विकास गर्न थाल्छन्। त्यो यदि सबै भन्दा केहि मनपर्दछ, तपाईं यो पनि मनपर्दछ। अब व्यक्ति राम्रो सामग्री बनाउनुको सट्टा ठूलो संख्याको अन्तर्क्रियामा बढी केन्द्रित छन्। ईन्स्टग्रामले मनपर्दो काउन्टर हटाउनको कारणहरू निम्न छन्:
गुणस्तरीय सामग्री विकास
इन्स्टाग्रामले मनपर्ने काउन्टर हटाउनको लागि एउटा मुख्य कारण। यो प्रयोगकर्ताहरू को लागी प्रकाशित गर्न को लागी गुणवत्ता को सामग्री को विकास को लागी अधिक ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी तपाइँलाई मन पर्छ।
झुण्ड मानसिकता छोड्नुहोस्
इन्स्टाग्राम पनि चाहान्छ कि अरुहरु आफैंले नचूरोस् जुन तिनीहरू साँच्चिकै मनपर्दो पोष्टहरू मात्र मन पराउँछन्।
प्रयोगकर्ताहरूले सोचे जस्तो परिवर्तन गर्नुहोस्
यो वास्तवमा पहिलो कारण नाममा जोडिएको छ। प्रयोगकर्ताहरू सोच्दछन् कि अधिक म मन पराउँछु र तपाईंसँग टिप्पणी छ, राम्रो छ। त्यसोभए उनीहरूले उनीहरूको सामग्रीको गुणस्तरको बारेमा बिर्सछन्, र उनीहरू सोच्दछन् कि म तिनीहरूलाई जति मन पराउँछु, उनीहरूलाई जति बढी स्वीकार्य छ, जुन वास्तविकताबाट टाढा छ।
इन्स्टाग्राम भित्र धेरै व्यक्तित्वहरू छन् जुन सामाजिक नेटवर्कमा प्रसिद्ध भयो। अब तिनीहरू मध्ये धेरैले अन्तर्क्रियाको लागि आफ्नो सामग्री डाउनलोड गरेका छन्। के इन्स्टाग्रामले खोज्दछ त्यो मनपर्दोको प्रतिस्पर्धा हटाउन को लागी, गुणस्तर सामग्री अपलोड गर्न को लागी सबै।
इन्स्टाग्राममा हरियो डटको मतलब के हो?
इन्स्टाग्राममा कुन फोटोहरू अपलोड गर्ने